रुढीवाद र संवेदनहिनताको पराकाष्ठा | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / रुढीवाद र संवेदनहिनताको पराकाष्ठा
रुढीवाद र संवेदनहिनताको पराकाष्ठा
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय March 11, 2018	0 130 Views
समाज कहिले काहीं यति कुरुप भएर प्रस् तुत हुन्छ, मानिसको मानिसप्रति नै घृणा जागे र आउँछ । तर, पनि फे रि बाँच्ने र बस् ने यही समाजमा हो , त्यसै ले सम्हालिएर अघि बढ्नुपर्छ । खासगरी सामाजिक रुढीवाद र अन्धविश्वासको सवालमा ने पाली समाज अहिले पनि निकै पछाडि छ । राजनीतिकरुपमा ने पाल धे रै अगाडि बढिसके को छ । यसको तुलनामा आर्थिक, सामाजिक र सांस् कृतिक रुपान्तरणको सवालमा ने पाली समाज निकै पिछडिएको छ । जसका कारण समाजमा बे ला–बे लामा यस् ता निर्मम घटना हुन्छन्, जसको मानव समाजमा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । मानिसले मानिसमाथि गनेर् यसप्रकारको अत्याचारको स्रो त ने पाली समाजमा रहे को चे तनाको स् तर नै हो  । समाजको ठूलो तप्का अझै पनि पुरानै सो च र संस् कारबाट निसृत छ । जसले गर्दा भयावह घटना हुने गरे का छन् ।
भर्खरै मात्र सुदूरपश्चिमको कै लालीमा बो क्सी आरो पमा एक किशो री आफ्नै समुदायमा लगातार ६ घण्टा कुटिएकी छन् । कक्षा १२ मा अध्ययनरत गरिब परिवारकी ती किशो री कुटिरहँदा, उनले जीवनको भीख मागिरहँदा के ही बलियाबांगाले कुटिरहे र बाँकी दर्शकले ताली बजाइरहे , मानौ ं त्यहाँ कुनै मध्ययुगीन नाटक मञ्चन हुँदै छ । सभ्य समाजमा यस् तो घटना कल्पना पनि गर्न सकिन्न तर पनि समाज एउटा असंगठित हुल हो , कहिले काहीं उत्ते जनामा आएर यसले नराम्रो गर्न पनि सक्छ । बिडम्बना त के दे खियो भने जनताबाट निर्वाचित नगर प्रमुख र जनताको सुरक्षाका लागि तै नाथ प्रहरीसमे त यो घटनामा नराम्ररी चुके  । एउटी अबो ध चे लीमाथि सिंगो समुदायले लगातार ६ घण्टासम्म कुटपिट गर्दा राज्यको उपस् िथति हुन सके न, यो आफै मा समस् याको विषय हो  । यो भन्दा अझ समस् या त जनप्रतिनिधि र प्रहरीमा दे खियो  । कुटिएकी चे लीको स् वास् थ्य र कानुनी उपचार हो इन, कुटपिटको अगुवाइ गनेर् धामीलाई रिहा गराउन नगर प्रमुखको अग्रसरता दे खियो  । पीडित पक्षको दबाबमा प्रहरीले धामीलाई गिरफ्तार त ग¥यो तर प्रहरी कार्यालयमा पु¥याएपछि ती धामीले प्रहरीलाई समे त अनिष्ट हुने बताएपछि प्रहरीले खुट्टा ढो के र धामीलाई छाडिदियो  ।
घटना सुदूरपश्चिमको एउटा थारु गाउँमा भएको भए पनि यो ने पाली समाजको प्रतिनिधिमूलक घटना हो  । यो सँगै कै यौ ं प्रश्न खडा भएका छन्, जसको सहज र व्यवहारिक जवाफ दिएर मात्र ने पाली समाजलाई अघि बढाउन सकिने छ । राजनीतिकरुपमा ने पाल धे रै अगाडि बढे पनि सामाजिक सांस् कृतिकरुपमा ने पाली समाज किन अघि बढ्न सके न ? अहिले हामीले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहे का छौ ं, के अब यो सँगै सामाजिक सांस् कृतिक रुपान्तरणका एजे ण्डा पनि अघि बढाउनुपनेर् हो इन र ? समाज रुढीवादमा फसे को छ तर समाजको अग्रदस् ता भनिने राजनीतिक दल र तिनले पठाएका जनप्रतिनिधि किन रुढीवादबाट बाहिर निस् कन सके का छै नन् ? जनताको सुरक्षाको जिम्मा पाएको प्रहरी धामीको मन्त्र लाग्ने डरमै उसको खुट्टा ढो क्ने अवस् था रहनुको कारण के हो ? यी प्रश्नको सही जवाफ नखोजी न समाजलाई रुढीवादबाट मुक्त गर्न सकिन्छ, न राज्य र राजनीतिक दलहरुलाई सामाजिक रुपान्तरणप्रति अग्रसर बनाउन सकिन्छ । यो घटना एक भए पनि यसबाट शिक्षा अने क लिएर ने पाली समाजलाई अघि बढाउन राज्य र राजनीतिक दलहरुले सामाजिक सांस् कृतिक रुपान्तरणको सवाललाई प्राथमिक एजे ण्डामा राख्न सक्नुपर्छ ।
Previous: ओली सरकारका चुनौती र सम्भावनाका राजमार्ग
Next: खुला जेरी, समोसा, पकौडी खादैनौ ंः विद्यार्थी